New Guyana to Barbados ndege dziri paInterCaribbean
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » New Guyana to Barbados ndege dziri paInterCaribbean
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Guyana Breaking News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
InterCaribbean Airways yakazivisa masevhisi kubva kuGeorgetown (GEO), Guyana kuenda kuBarbados (BGI), nendege dzekubatanidza kuenda kuSt Vincent neGrenadines (SVD), Antigua (ANU), Grenada (GND), Dominica (DOM), uye St Lucia (SLU). )
Kuenderera mberi nendege kuburikidza Barbados kuenda kuAntigua, ichaenderera mberi kuProvidenciales uye kubatanidza kuenda kuHavana, Cuba.
Nemakwara matsva aya uye nendege dzakarongeka dzinobatana nendege dzinoenda kuUnited Kingdom, USA, neCanada, tinotarisira kutambira vatengi kubva pasirese.
Vadivelu Comedy InterCaribbean inotarisira kubatanidza Georgetown kune mamwe mapoinzi eCaribbean munguva pfupi iri kutevera kuendesa paCaribbean yakabatana nayo InterCaribbean Airways.
Ndege dzakarongerwa kutanga kushanda musi waZvita 17, 2021 munguva yenguva yezororo nendege gumi nembiri pasvondo dzakarongwa kushanda pakati peGeorgetown ne Barbados.
Minister of Public Works, Juan A. Edghill akatambira ndege kumusika weGuyana pamhemberero dzakaitirwa paDukes Lodge muGeorgetown muna Mbudzi 5, 2021. Minister Edghill vakati hapana kubatana kwakakwana pakati peGuyana nedzimwe nyika dzeCaribbean, neGuyana. saka hurumende iri kufadzwa nekuwedzera kwendege kujoinha matenga ayo ane hushamwari.
Mukuzivisa sevhisi pachiitiko chekutanga muGeorgetown chakapindwa neMakurukota, MaDiplomats anogara muGuyana, uye nhengo dzevebhizinesi. Sekureva kwaVaGardiner, "Nekuedza kwakavhurika kwebhizinesi kwehurumende iyi, takakwanisa kuisa zvese, uye isu tiri pano kuti tiite chiziviso, uye kuita kuti basa rive rechokwadi kubva muna Zvita 17."